Ebe nrụọrụ weebụ 6 kacha mma ilele ihe nkiri n'efu n'ịntanetị | Androidsis
Weebụsaịtị 6 kacha mma ilele ihe nkiri n'efu n'ịntanetị
Aaron Rivas | 10/11/2021 08:00 | Ngwa gam akporo, Ngwaọrụ ndị ọzọ
Otu n'ime ihe omume na-adọpụkarị uche bụ ikiri ihe nkiri. Ma ọ̀ bụ maka ntụrụndụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ọ dịghị ewute gị ịhụ fim dị mma site n’oge ruo n’oge, ma n’ụlọ ọrụ ma nanị gị. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ị ga-azụta ha n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ dijitalụ, ma ọ bụ gaa na fim iji nwee mmasị na ha; Enwere ọtụtụ saịtị, ọnụ ụzọ na ibe weebụ ebe ọtụtụ aha dị n'efu.
Ebe ị ga-ahụ saịtị kacha mma ikiri ihe nkiri n'efu n'ịntanetị. N'ime nke ọ bụla n'ime ha ị ga-akwụ ụgwọ ego ọ bụla na, nke ka mma, n'ime ha niile, ị ga-ahụ ihe nkiri kachasị amasị ma na-atọ ụtọ ikiri; enwere ụdị niile dị na katalọgụ ha, yabụ ka anyị rute ya.
N'okpuru ị ga-ahụ ọtụtụ webụsaịtị ka ikiri ihe nkiri n'efu n'ịntanetị. Ọ bụrụ na otu anaghị arụ ọrụ maka gị, gbalịa ọzọ. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na mmadụ enweghị ihe nkiri ị chọrọ ịhụ, n'ezie na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ. Ihe ọzọ bụ na ọtụtụ n'ime ibe weebụ ndị a, ịbụ ndị nweere onwe ha, nwere mgbasa ozi -ụfọdụ ndị ọzọ, ndị ọzọ na-erughị- yana njikọ na-ebugharị na saịtị ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ha so na ndị kasị mma na-ekiri ihe nkiri na Internet.
2 Ihe nkiri Plus
3 Lelee ihe nkiri Live
5 Lọ Cinema
6 Ihe nkiri FreeHD
Iji mee ka mkpokọta mkpokọta a malite, anyị nwere Miradetodo.net (nke na-ebugharị na Miradetodo.co), otu n'ime weebụsaịtị kachasị ewu ewu na-ekiri ihe nkiri n'ịntanetị n'efu mgbe ọ bụla ịchọrọ. Ma ọ bụ na Portal a nwere ọtụtụ aha, ihe nkiri na ihe ngosi iji hụ ndị enyi, ezinụlọ, ndị ọrụ ibe na ndị enyi.
Ihe nkiri kachasị ugbu a na ndị na-eme ihe nkiri dị n'ebe ahụ. Enwekwara aha ochie, dị ka oge ochie, yabụ enwere maka onye ọ bụla na afọ niile, ma ụmụaka ma ndị okenye. Ọ nwekwara usoro, akwụkwọ akụkọ, ihe nkiri TV na ndị ọzọ, niile sitere na nyiwe dị iche iche dị ka Netflix. Tụkwasị na nke ahụ, ọdịnaya niile nwere synopses, trailers na ozi gbasara ihe nkedo na-ekere òkè, ma ọ nwere sava dị iche iche ịhọrọ site na ya, ya mere ọ bụrụ na mmadụ ada ada, e nwere ndị ọzọ nwere ike ịme ihe nkiri ahụ mgbe niile.
Banye ebe a na Miradetodo.net.
Ihe nkiri Plus
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado fim ma ọ bụ nwee enyi ya, ikekwe ị nụla ka mmadụ na-ekwu maka ya PelisPlus, otu n'ime ibe weebụ a na-ejikarị ekiri ihe nkiri n'ịntanetị na-akwụghị otu penny.
Echela nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe nkiri egwu, egwu, ime ihe, enweghị obi abụọ, ihe nkiri, akụkọ sayensị, sinima, ndụ ndị na-ese ihe, ndị nọ n'afọ iri na ụma, anime na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ, PelisPlus bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma na ịntanetị. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere akụkụ dị iche iche nke, dịka ọmụmaatụ, ihe nkiri nwere ike ịmecha ya site na afọ na ụdị. O nwekwara mmalite na ọdịnaya a na-emelite ugboro ugboro. Akwụkwọ akụkọ ya na-eto eto mgbe niile.
N'aka nke ya, PelisPlus nwere ihe nkiri dị elu. Chezọ maka ihe nkiri e dekọrọ na sinima yana ụda egwu na ọdịyo dị egwu. Enwekwara usoro ị ga-ekiri na, n'aka nke ọzọ, ọ nweghị ọtụtụ mgbasa ozi ma ọ bụ njikọ na-ebugharị na saịtị ndị ọzọ.
Tinye PelisPlus ebe a.
Lelee ihe nkiri Live
Ibe weebụ a nwere ọtụtụ puku ihe nkiri ị ga-ekiri oge niile. Enwere utu aha na ụdị niile, dị ka omume, ihe egwu, ihe nkiri, egwu egwu, ihe nhụsianya, akụkọ sayensị, ndị dike, katuun na ụdị ọ bụla ọzọ. Ya interface dị nnọọ mfe na ọ na-ahazi fim nke ọma. Na mgbakwunye, ọ nwere igwe nchọta dị ike nke na-achọta ha ngwa ngwa na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, o nwere fim n'ọtụtụ asụsụ na asụsụ, n'etiti ha bụ Castilian (Latin) na Spanish.
Ma ọ bụghị, A na-emepụtagharị ihe nkiri ị nwere n'ịdị mma yana ụda mara mma, Ya mere, ahụmahụ na MiraPeliculas.Live bụ otu n'ime ndị kasị mma.
Banye ebe a na MiraPeliculas.Live.
Ebe nrụọrụ weebụ ọzọ magburu onwe ya ikiri ihe nkiri n'efu na ịntanetị bụ HDFull. Na, dị ka aha ya na-egosi, Portal a nwere ihe nkiri na ọdịnaya n'ozuzu na-enwe mmasị na vidiyo dị mma na àgwà oyiyi, yana ụda. Ya mere, ahụmahụ nke ikiri ihe nkiri dị mma na HDFull bụ otu n'ime ihe kachasị mma.
N'otu aka ahụ, Site ya interface ọ ga-ekwe omume ịhụ nkọwa na synopsis nke ọ bụla nkiri. Na mgbakwunye, ọ nwekwara sava dị iche iche iji lelee ma kpọọ ihe nkiri. Nke kachasị mma, ọ na-enye ohere ka ebudata ha, ka enwere ike ịchekwa ha na kọmputa, mkpanaka ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ ọnụ ọnụ na ebe nchekwa zuru ezu maka ịmeghachi azụ azụ.
Tinye HDFull ebe a.
CineCalidad bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime weebụsaịtị zuru oke ma a bịa n'ihe nkiri ịntanetị n'efu. Ma ọ bụ na saịtị a, kedu ka ọ ga-esi dị iche, na-abịa na puku kwuru puku ihe nkiri ikiri, onye ọ bụla ka ibe ya mma. Na mgbakwunye, ọ nwere mwepụta ndị a na-atụ anya ya, ma na sinima na nyiwe mgbasa ozi ndị ọzọ yana ọdịnaya multimedia.
N'aka nke ya, CineCalidad nwekwara ihe nkiri dị mma n'ihe onyonyo, vidiyo na ụda, na-akwụ ụtụ maka aha ya, n'ezie. Ihe ọzọ bụ na o nwere ngalaba nke ị nwere ike ịtụ aro ihe nkiri na ọdịnaya maka ikpo okwu ma ọ bụrụ na ọ dịghị n'oge a, ọ bụ ezie na, maka nke a, ị ga-ahapụ email ahụ wee rịọ arịrịọ, ihe nke a. nzọụkwụ ole na ole na ihu igwe.
Banye ebe a na CineCalidad.
Ihe nkiri FreeHD
Iji mechie na-enwe ọganihu, anyị na-ewetara Ihe nkiri FreeHD, ibe weebụ nke na-achọghị ọtụtụ mmeghe n'ihi aha nke ọ na-anya isi.
Atụla mgbagwoju anya na ọ bụ ikpeazụ ... webụsaịtị a bụkwa otu n'ime ihe kachasị mma ikiri ihe nkiri efu na ịntanetị. Ọdịnaya ya dị ugbu a, yabụ na katalọgụ ya anyị nwere ike ịchọta site na ihe nkiri kachasị ọhụrụ na igbe igbe ruo na nke kacha ochie, dị ka oge ochie nke 90s na 80s, na ọbụna tupu. Tụkwasị na nke ahụ, interface ya dị mfe nghọta, n'ihi na ọ bụ na Spanish, na fim ndị dị mma na ụda. Okwesiri iburu n'uche na Ọ nwere ọtụtụ ihe nzacha iji chọọ ma chọta ha.
Tinye ebe a na PelisGratisHD.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Weebụsaịtị 6 kacha mma ilele ihe nkiri n'efu n'ịntanetị
Jiri ohere 11.11 na-enye na Redmi Buds 3 Pro na POCO X3 Pro maka obere oge.
Onyinye kacha mma na Xiaomi na POCO n'oge nkwalite Nọvemba 11